Trump: Safiirka Ingiriiska Waa Doqon Maraan Ah
Thursday October, 17 2019 - 22:09:16
Wednesday July 10, 2019 - 09:49:59 in by salman abdi
Trump: Safiirka Ingiriiska Waa Doqon Maraan Ah Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay safiirka Ingiriiska
u fadhiya Mareykanka inuu yahay nin doqon ah oo aanan fakarin.
"Waa nin doqon ah" ayuu yiri Madaxweyne Trump, xilli Ingriiska iyo Mareykanka ay ka dhex taagan tahay xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhalatay Emailo soo shaac baxay.
"Waa in uu ka hadlaa arrimaha ka taagan dalkiisa iyo Ra'iisul wasaaraha UK, May guuldarrada ay kasoo hoyisay arrinta ka bixidda Midowga Yurub, wax dan ah kama gelin dhaleeceenta lii jeedinayo si kastaba ha u xumaadeen " ayuu yiri Trump.
Hadalkan Trump ayaa kusoo beegmaya xilli xafiiska Downing Street ee looga taliyo dalka Ingiriiska uu soo saaray war murtiyeed lagu sheegay in Ra'isulwasaaraha Britain Theresa May ay kalsooni buuxda ku qabto safiirka u fadhiya Maraykanka, inkasta oo madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu sheegay in uusan la shaqayn doonin Sir Kim Darroch.
Axaddii ayay aheyd markii ay bannaanka usoo baxeen Emailo muujinayaa aragtida uu safiirka ka qabo maamulka Trump, isaga oo ku tilmaamay mid qalalaase ka samaysan, islamarkaasna ay wax badan ka qaldanyihiin.
Safiirka Ingiriiska u fadhiyo Mareykanka Sir Kim ayaa la sheegay in uusan kulan la qaadan doonin gabadha Trump, Ivanka, kulankaas oo la qorsheeyay maanta, sida loo sheegay BBC.
"Safiirka waalan ee UK ee sanka laga galiyay Maraykanka ma ahan qof aan ku faraxsanahay, waa mid doqonimada ay ka tan badatay" ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka.
Theresa May ayaa safiirka ku tilmaamtay nin daacad ah oo runta ka sheega waxa uu arko ama dareemo.
Hadalka Trump ee ah 'lama shaqayn doono Kim' ayaa ka dhignaan kara in danjiraha si rasmi ah looga eryay Maraykanka, lana siiyay waxa loo yaqaano Persona Non Grata.
Daawo: Marxuum Siciid V6 oo lagu aasay Ingiriiska iyo Masuliyiin kusugan Birmingham oo tacsiyadeeyey
13/10/2019 - 21:44:58
Wasiirka arimaha gudaha Mudane Maxamed kaahin Axmed oo la kulmay safiirka Ethiopia ee somaliland
13/10/2019 - 09:36:10
Gudoomiyaha Maxakamada Sare Ee Somaliland Oo Kulan La qaatay Safiirka Midwaga Yurub
11/10/2019 - 15:59:44
Hargeysa: Daawo Fannaanka Maxamed BK oo Safar Ugu Baxaya Waddanka Ingiriiska iyo Nuxurka Farriin uu taageerayaashiisa la wadaagay
10/10/2019 - 10:42:49
Hargysa:Daawo Nuxurka Kulan Ay Arimo Badan Kaga Wada Hadleen Oo Dhex Maray Gudoomiye Baashe Iyo Safiirka Mid
09/10/2019 - 14:40:15
Hargysa:Safiirka Jabuuti U Fadhiya Somaliland oo Tacsi U Diray Madaxweynaha iyo Dawladda Jabuuti
08/10/2019 - 17:34:42
Gudaha:-"Kismaayo Waxaynu Utagnaa Waa Doqoniimo "Eng Maxamed Xaashi Wasiirkii Horee Wasaarada Maaliyaad Somaliland.
05/10/2019 - 14:17:28
Borama " Xafiiska Jabuuti in Boorama la keeno ayay ahayd safiirkana waxanu leenahay...'Badhasabki hore Saaxil
04/10/2019 - 11:34:10
Hargeysa: Daawo Xisbiga Ucid Oo Ku Baaqay In Safiirka Jabuuti Dalka Si Deg dega Uga Baxo
02/10/2019 - 14:57:10
Madaxweyne Waare oo la kulmay Safiirka UK ee Soomaaliya
02/10/2019 - 11:03:36